ज्योतिषशास्त्र अनुसार रातमा महिलाले यस्ता काम गर्दा भित्रिने छिन् लक्ष्मी,सँधै हुनेछ धनको बास – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/ज्योतिषशास्त्र अनुसार रातमा महिलाले यस्ता काम गर्दा भित्रिने छिन् लक्ष्मी,सँधै हुनेछ धनको बास
ज्योतिषशास्त्र अनुसार रातमा महिलाले यस्ता काम गर्दा भित्रिने छिन् लक्ष्मी,सँधै हुनेछ धनको बास
काठमाडौँ । मानिसहरुले गर्नुपर्ने नित्य कर्मका बारेमा शास्त्रले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ। हामीले मात्र अनुसरण गरे दैनिक जीवन सहज हुन्छ। जोतिषशास्त्रलाई मान्ने हो भने रातिको समयमा पनि केही त्यस्ता काम गर्नुपर्छ जसले तपाईको घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि छाउँछ । त्यस्तै यस्ता कामलाई नियमवद्ध अपनाउनाले घरमा सदैव लक्ष्मीको बास हुन्छ।
शास्त्र भन्छ – महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ १
१.सुर्यास्त पछि महिलाहरु कसैको घरमा पनि दुध, दही, नुन, तेल र प्याज लिन जानु हुँदैन । यसो गर्नाले उनीहरुको जीवनमा बाधाहरु आउने गर्छन् र धेरै कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।२. ज्योतिष शास्त्रका अनुसार महिलाहरुले सुत्नु अघि कपाल नुहाउनुहुँदैन । यस्तो गर्नु हानिकारक हुन्छ ।३. महिलाहरुले रातमा झठा भाँडाहरु भान्छामा राख्नुहुँदैन । यसो गर्नाले लक्ष्मीको बास घरमा हुन्छ भने वैभव, सम्पन्नता घरमा आउँछ ।
– ज्योतिष शास्त्रका अनुसार घरकी महिलाले हप्तामा एकपटक घरमा रहेका सबै कोठामा कालो नुन पेपरमा बेरेर राख्नु पर्छ । यस पश्चात बिहान उठेपछि कसैसँग नबोली कागजमा राखिएको नुनलाई बाहिर फाल्नुपर्छ । यसले घरमा उत्पनन भएका नकारात्मक उर्जा बाहिर निकाल्न मदत गर्छ ।– रातमा सुत्नुअघि घरभित्र रहेको कुच्चो दक्षिण पश्चिम दिशामा लुकाएर राख्नुपर्छ । यसले धन लाभ गर्छ ।– राती सुत्नुअघि भान्छामा एक बाल्टी पानी भरेर राख्नुहोस् । यसले घरमा सुख–समृद्धिको बास गराउँछ । खाली बाल्टी राख्नुले घरमा चिन्ता भर्ने काम गर्छ
आइफोन किन्नका लागि मृगौला बेचेका युवा मृ त्युसँग लड्दै
१४ वर्षकी बालिकालाई काकाले बनाए गर्भवती, छोरा जन्मियो
प्याजले १ मिनेटमै निको पार्छ दाँतको दुखाई, जान्नुस् ५ घरेलु उपाय
यी हुन् बच्चा जन्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सुत्केरी !